हाम्राे पिपलबाेट » ’पीडित’ले बयान फेर्दा पनि किन छुटेनन् पल शाह ? अब फैसला कुर्नुपर्ने ’पीडित’ले बयान फेर्दा पनि किन छुटेनन् पल शाह ? अब फैसला कुर्नुपर्ने – हाम्राे पिपलबाेट
’पीडित’ले बयान फेर्दा पनि किन छुटेनन् पल शाह ? अब फैसला कुर्नुपर्ने
पलविरुद्धको उजुरीपछि सात दिन, १२, चार र पाँच दिन म्याद थपेर अनुसन्धान गरिएको थियो ।
गएको चैत ८ गते उनीविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालत तनहुँमा अभियोगपत्र दर्ता गराएको थियो । चैत १० मा जिल्ला अदालतले पललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।
बलात्कार गरेको आरोप लगाउँदै अदालत गएकी किशोरीले अदालतमा बयान फेरेकी थिइन् । तनहुँ जिल्ला अदालतमा बकपत्रका क्रममा उनले आफूमाथि बलात्कार नभएको बयान दिएकी थिइन् ।
२२ जेष्ठ २०७९ मा प्रकाशित